Aqalka sare oo ka doodaya dhismaha guddiga la dagaallanka musuqa - Halbeeg News
Aqalka sare oo ka doodaya dhismaha guddiga la dagaallanka musuqa
MUQDISHO(HALBEEG)- Golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo talaado ah kal fadhi ku yeelan doono xaruntooda magaada Muqdisho.
Fadhiga ay yeelanayaan maanta golaha ayaa la filayaa in looga hadlo ajandayaal ay kamid yihiin ansixinta hindise sharciyeedka dhismaha guddiga qaran ee la dagaallanka musuq maasuqa oo horay loo hor keenay golaha.
Wasiirka wasaaradda caddaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlay mid ka mid ah kulamadii hore ee golaha ayaa sheegay in aysan marna suura gal ahayn dhismaha guddiga qaran ee la dagaallanka musuq maasuqa iyada oo aan marka hore la meel marinin sharciga dhismaha guddiga oo udub dhexaad u ah howlahaas.
Golaha aqalka sare ayaa kal hore dood ka keenay arrimo ay ka mid yihiin cidda sharci ahaan awoodda u yeelanaysa soo magacaabista guddiga iyo ansixinta guddoonka sare ee uu yeelanayo guddiga.
Fadhiga golaha ee maanta loo madlanyahay ayaa looga fadhiyaa xubnaha golaha inay cod u qaadaan ansixinta hindisaha sharciga dhismaha guddiga qaran ee la dagaallanka musuq maasuqa si dabadeedna loo sii amba qaado dhismaha guddiga la dagaallanka musuq maasuqa.
Golyaasha sharci dajinta ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn isugu howla dib usoo nooleynta iyo boor ka jafidda shuruucdii dalka iyaga oo kaashanaya wasaaradaha xukuumadda oo kolka hore golaha hor keena hindisayaal sharciyeed oo ay doonayaan in golaha uu ka dodo turxaan bixin kadibna loo meel mariyo.
Wasaaradaha xukuumadda federaalka ayaa iyaguna dadaal ugu jira in wasaarad walba ay hesho xeerkii u gaarka ahaa ee lagu maamuli lahaa wasaaradda.
Fadhiga maanta ee aqalka sare ayaa imanaya kadib markii shalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay maalinta caalamiga ah ee Naafada Adduunka uu aqalka sare ugu baaqay in ay meel mariyaan hindise-sharciyeedka naafada qaranka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoogga saareyso u adeegidda dadka naafada ah.
Nin Mareykan ah oo lagu eedeeyay in uu hub ku handaday dhalinyaro Soomaali ah
Ciidanka NISA oo howlgal kusoo qabtay xubin ka tirsan Al-shabaab